Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Dhiibistii Qalbi-Dhagax oo Dhul-gariir Siyaasadeed U Horseeday Soomaaliya.
Faallo: Dhiibistii Qalbi-Dhagax oo Dhul-gariir Siyaasadeed U Horseeday Soomaaliya.
Mudo haatan sadex bilood laga joogo qiyaastii ayey aheyd markii dhul gariir siyaasadeed oo aad u culus uu ruxay guud ahaan geyiga soomaaliyeed ka dib markii uu soo baxay warkii la xidhiidhay in muwaadin soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdikariim Sheekh Muuse oo ku magac dheer “Qalbi dhagax” oo isagoo dhulkiisa hooyo jooga inta la soo qabtay loo gacan geliyey cadawga soomaaliyeed ee Itoobiya.
Ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtay aad ayey uga gil gilatay ugana xumaatay dhacdadaasi aadka u foosha xumayd bulshaduna aad ayey u haaraameen madaxda sare ee dalka waxaana dhacday in shacabka soomaaliyeed ay dalbadeen in faah faahin laga siiyo sida ay wax u dhaceen iyadoo taasina ay keentay in xildhibaanada baarlamaanka oo metala shacabku ay arintaa soo dhex galeen iyagoo doodo dhawr ah ka yeeshay kiiska qalbi dhagax waxaana aakhirkii ay isku raaceen in gudi soo baadha arimahaas loo saaro.
Gudigaas oo mudo bil ka badan ay ku qaadatay in ay warbixin kasoo diyaariyaan sida ay wax u dhaceen ayaa ugu dambayntii sabtidii fadhi uu baarlamaanku yeeshay kusoo bandhigay natiijadii baaritaanka ay sameeyeen. Guddoomiyaha Guddiga baadhitaanka kiiska Xildhibaan Cali Xoosh ayaa warbixin dheer ka hor akhriyay Xildhibaanada, isagoo xusay in heshiisyadii ay cuskatay Xukuumadda ee dowladdii hore gashay aanu aheyn heshiis isku celin maxaabiis.
Waxaa uu sheegay in heshiisyadaas ahaa mid iskaashi oo lagu xalinayay xaalado amni oo ka jira xuduuda, gaar ahaan ay wada galeen dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowlad Itoobiya. Taliska Nabadsugida ayaa lagu eedeeyay dhiibista Qalbi Dhagax inay si khaldan u maareeyeen oo aanay u marin hab sharci ah, isla markaana aan lagala tashan Hey’adaha Garsoorka dalka.
Sidoo kale Guddiga ayaa sheegay in arrinta Kiiskan aan Madaxda dowladda laga siin macluumaad sax ah, taasoo u muuqata Mas’uuliyadda dhiibistii Qalbi Dhagax in dusha laga saarayay Taliskii hore ee Nabadsugida. Intaas kaddib Guddoomiyaha Golaha shacabka ayaa dalbaday in cod loo qaado Warbixinta Guddiga, iyadoo 152 Xildhibaan ay ogolaadeen warbixintan, halka 6 ay diiday waxaa ka aamusay 3 Xildhibaan.
Dhinaca kale dad badan oo soomaaliyeed ayaa markii ay qiimeeyeen natiijada baaritaanka gudigii baarlamaanka ee kiiska Qalbi dhagax ayaan ku qancin iyadoo dad kale oo badana ay soo dhaweeyeen waxaana su’aalaha la iska weeydiinayo ka mid ah ma halkaas ayuu ku dhamaaday kiiska qalbi dhagax mise weli waa mid furan oo baadhitaanku waa sii soconayaa ?